जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ? यी हुन् सात तरिका – Health Post Nepal
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ? यी हुन् सात तरिका
२०७८ मंसिर ९ गते १०:५५
जतिजति चिसो बढ्दै जान्छ, उतिउति तपाईंको स्वास्थ्य सन्तुलित राख्न कठिन हुँदै जान्छ । जाडोमा स्वास्थ्य धेरैको चिन्ता र चासोको विषय हो । किनकि, बाहिरी वातावरणले गर्दा तपाईंलाई नियमित व्यायामको तालिका अनुसरण गर्न पनि चुनौती हुन्छ । त्यसैगरी घरमै बसिरहन मनलाग्छ र भोक पनि बढी लाग्छ । यस्तोमा स्वस्थ कसरी रहने त ?
१) फ्लुबाट बच्नुहोस्
जाडोमा स्वस्थ रहने उत्तम उपाय फ्लुबाट बच्ने तरिका अपनाउनुहोस् र लागिहालेमा सावधानी अपनाउनुहोस् । त्यसका लागि–
– हात बारम्बार मुख तथा नाकतर्फ गइरहने हुँदा हात धुने कुरामा सचेत रहनुहोस् ।
– संक्रमितको वरिपरि नजानुहोस् ।
– फ्लुले ग्रस्त हुनुहुन्छ भने बाहिर नजानुहोस् ।
– बच्नका लागि भ्याक्सिन लिन सक्नुहुनेछ ।
– भिडभाडमा नजानुहोस् ।
२) मौसमी खाना खानुहोस्
– हरिया सागसब्जीसहितको मौसमी भेजिटेबलको सुप खानुहोस् ।
– जाडोमा तातो, कडा खान मनलाग्छ, तर चिल्लो, नुनिलो गुलियो नखानुहोस् ।
३) घरभित्रै भए पनि व्यायाम गर्नुहोस्
नआत्तिनुहोस्, चिसो बढ्दै छ, मर्निङवाक जान सकिएन, तर घरभित्रै बसेर पनि कम्तीमा आधा घण्टा उफ्रिनुहोस् । टिभी वा मोबाइल हेरेर योग गर्न सक्नुहुन्छ । चिसोबाट बच्न पनि व्यायामको माध्यमबाट शरीरलाई तताउनु जरुरी छ ।
४) बाहिर जाने नै हो भने न्यानो लुगामा ध्यान दिनुहोस् ।
घरभित्रको व्यायामले पुग्दैन, बाहिर जानु नै हुन्छ भने शरीरलाई तात्ने गरी टाउकोसम्मै न्यानो लुगा छान्नुहोस् । जाडोमा न्यानो लुगा नलगाई हिँड्दा हाइपोथर्मिया हुन्छ भने धेरै लुगा लगाउँदा व्यायाम गर्न असहज हुन्छ । त्यसैले बाहिर व्यायाम गर्न जानुहुन्छ भने न्यानो र सहज लुगा रोज्नुहोस् ।
५ छालालाई माया गर्नुहोस्
लुगा धेरै लगाउनुपर्ने, हिटरमा बस्नुपर्ने आदि कारणले गर्दा छाला सुक्खा भएर जाडोमा हैरान हुन्छ । छाला सुक्खा हुने र क्य्राक हुनाले छालालार्ई मोइस्चर्ज राख्नु जरुरी छ । छालाको सरसफाइमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । धेरै तातोपानीले ननुहाउने, मनतातो पानीले मात्र नुहाउने गर्नुहोस् । नुहाउनासाथ तेल तथा लोसन लगाउन नबिर्सिनुहोस् ।
६ प्रशस्त झोलिलो पदार्थ खानुहोस्
जाडोमा अधिकांश मानिस पानी पिउन बिर्सन्छन् । जाडोमा दिनभर पानी नपिउने र चिया मात्र पिउँदै हिँड्नुहुन्छ भने झन् जोखिम हुन्छ । त्यसैले प्रशस्त पानी, सुप, हर्बल चिया, अदुवा चिया पिउनुहोस् ।
जति स्ट्रेस लिनुहुन्छ, त्यति नै फ्लु तथा कोल्ड भाइरसले सताउँछ । त्यसैले दिनभर आनन्दित हुनुहोस् । शरीरलाई माया गर्न नबिर्सनुहोस् ।